उत्कृष्ट शैक्षिक अर्वाडबाट प्रिन्सिपल रिंकु ढकाल सम्मानित
आइतवार, साउन ३१, २०७८ मा प्रकाशित
बोष्टर मिडियाले युरेसियन स्कुलका प्रिन्सिपल रिंकु ढकाललाइ उत्कृष्ट शैक्षिक अवार्ड (कोभिड हिरो अवार्ड) विभूषणले सम्मान गरेको छ । प्रिन्सिपल रिंकु ढकाललाई शनिबार एक कार्यक्रमका बीच अवार्ड प्रदान गरेको हो । कोभिड महामारीका बीच प्रिविधिको उच्चतम प्रयोग मार्फत ढकालले साना बालबालिकाहरुलाई कसरि..
काठमाडौ । सम्बन्ध राम्रो हुन एकपटक राम्रो भूमिकाले मात्र पुग्दैन । यसलाई जारी राख्न र नियमित गराउनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि सम्बन्धलाई बलियो र राम्रो बनाउनका लागि सम्बन्धमा लापरवाही र एकअर्कालाई ध्यान नदिनुले अक्सर सम्बन्धमा कमजोरी ल्याउँछ । त्यसकारण तपाईं यस्ता गल्ती गर्नबाट..
एजेन्सी । तौल बढ्दा हृदय रोग, मधुमेह, स्ट्रोकका साथै विशेष प्रकारका क्यान्सरहरुको सम्भावना रहने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शरीरको तौल नियन्त्रण गर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ । तौल व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट एकै महिनामा ३ किलोसम्म तौल कम गर्न सकिन्छ । अमेरिकी स्वास्थ्य एजेन्सी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड..
फुर्सदमा सुन्दर रहन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
एजेन्सी । सबैलाई सुन्दर हुन मन पर्छ । तर कतिपय अवस्थामा अनुहारमा देखापर्ने दागले अनुहारको सुन्दरता बिगार्छ। प्राकृतिक रूपमा यस्ता दाग हटाउन अपनाउनु पर्ने बिभिन्न उपायहरु यस्ता छन् । – दुई चम्चा जौको धूलोमा कागतीको रस मिसाई पेस्ट बनाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउने गर्नुपर्छ । – कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण..
विवाहित जोडीहरुबीच कहिलेकाहिँ खटपट हुनु सामान्य हो । एकअर्काबीच विचार, योजना वा निर्णयहरु नमिल्दा केही तितोमिठो हुन्छ नै । यस्तोमा कोही रिसाउने, घुर्क्याउने गर्दछन् । यस्तोमा आफ्नो पार्टनरको मुड राम्रो बनाउन केही टिप्स अपनाउनु पर्दछ । आफ्नो जीवनसाथीको मुड राम्रो बनाउन सबैभन्दा सजिलो, सरल र सस्तो..
काठमाडौ । थ्रेडिङ अर्थात् शरीरका अनावश्यक रौं उखेल्ने काम । हात, पाखुरालगायतका रौं देखि आँखी भौं आसपासका रौं उखेल्न महिलाहरू महिनामा दुई पटकसम्म पार्लर धाउने गर्छन्। कतिले घरमै पनि थ्रेडिङ गर्छन्। तर, थ्रेडिङपछि हुने दुखाइ र खटिराबाट छुट्कारा पाउनका लागि आमयुवतीहरूले केही गल्ती गर्छन्। यसबाट..
स्लिम बन्न कसलाई मन नहोला ? सबै स्लिम र आर्कषक शरीर चाहान्छन् । तर स्लिम बन्न सजिलो भने छैन । अझ स्लिम बन्ने बहानामा निम्न गल्ती गर्नु हुँदैन । १. खाना घटाउने स्लिम बन्ने बहानामा अधिकांश मानिसले गर्ने एउटै साझा उपाय हो, खाना कम खाने । तर, खाना कम खाँदा क्यालोरीमात्र होइन, शरीरलाई आवश्यक पर्ने अन्य..
तातो पानीले नुहाउनुस् डिप्रेशन भगाउनुस् !
बिहिबार, जेष्ठ ६, २०७८ मा प्रकाशित
एजेन्सी । अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले हालै गरेको एक रिसर्चमा डिप्रेशन हटाउन तातो पानीले नुहाउँदा फाइदा पुग्ने बताएका छन् । अमेरिकाको विस्कोन्सिन युनिभर्सिटीको रिसर्चमा डिप्रेशनका बिरामीले तातो पानीले नुहाउँदा शरीरमा ताजगी आउने र डिप्रेशनको खतरा पनि कम हुने बताइएको छ । वैज्ञानिकका अनुसार हरेक ५ जनामा..
‘जहिले पनि नेपालको लागि र जहापनी नेपालीको लागि’ भन्दै फुयालको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज गठन
काठमाडौँ । देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई संगठित गर्दै नेपाल र नेपालीको हित र विकासको काम गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजले नेपालमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । लामो समय देखि देश बिदेशका विभिन्न संघसंथाहरु र पत्रकारिता मार्फत देश र समाजको सेवा गर्दै आएका चन्द्र कुमार..
आजकल धनी मानिसहरूले युवतीहरूसँगको नयाँ किसिमको सम्बन्धले चर्चा पाएको छ । त्य हो सुगर रिलेसनशिप । यो प्रचलन अहिले बढेर गएको छ । उमेर पुगेका धनी पुरुषले कम उमेरका युवतीसँग सम्बन्धका लागि मोटो रकम खर्चिने गरेका छन् । यस्तो सम्बन्धमा रहेका युवतीलाई सुगर बेबी र पुरुषलाई सुगर ड्याडी भन्ने गरिन्छ ।..
देबी महर्जन “सौन्दर्य अवार्ड बाट सम्मानित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय खबर डटकमको आठौ वार्षिकोत्सवको अबसरमा सुप्रिम ब्युटी पार्लरकि प्रोपाइटर देबी महर्जन “सौन्दर्य अवार्ड बाट सम्मानित हुनुभएको छ । बिगत १३ बर्षदेखि सौन्दर्य क्षेत्र मार्फत मुलुकलाई सेवा पुर्याउदै आएको तथा सौन्दर्य ब्यबसाय मार्फत रोजगार प्रदान गरि सामाजिक कार्यमा समेत..
कसरी बन्ने सुन्दर र तन्दुरुस्त ?
सुन्दर देखिन सौन्दर्य प्रसाधनको प्रयोग मात्र काफी छैन । न केसको स्यहार गरेर मात्र पुग्छ । अनुहारदेखि हातखुट्टा, केस, नङ समग्र रुपमा सुन्दर र स्वस्थ्य हुन जरुरी छ । यसका साथै आफ्नो छालाको रंग, उचाई, मोटाई जस्ता शारीरिक बनौट अनुरुप सहि पहिरन लगाउनु पर्छ । स्वस्थ्य जीवनतर, यतिले मात्र पनि पुग्दैन । यसले त..